विना आधार लागेको र खुलेको लकडाउनका अनगिन्ति ‘साइड इफेक्ट’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
साउन ८, २०७७ बिहिबार १३:११:३५ | मिलन तिमिल्सिना
काठमाण्डाै – सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गर्दा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक जना मात्र थियो । एक सय २० दिनपछि लकडाउन खोलेको दिन नेपालमा एक सय ५० नयाँ सङ्क्रमित थपिएका थिए । एक जना सङ्क्रमित भेटिँदा गरेको लकडाउन एक सय ५० जना सङ्क्रमित थपिएका दिन खुल्दा धेरैलाई सरकारले गरेको निर्णयका आधार के थिए भन्ने जान्न मन छ । सरकारले लकडाउन हटाउने निर्णय गरेपछि धेरैले प्रश्न गरेका छन्, ‘सरकारले किन लकडाउन गर्यो र किन हटायो ?’ तर प्रश्न अनुत्तरित छ ।
एक जना सङ्क्रमित भएको बेला सरकारले कोरोनाले सखाप नै पारिसक्यो भन्ने पारामा लकडाउन लगायो । अहिले एक सय ५० जना सङ्क्रमित थपिएको दिन कोरोना सखाप नै भइसक्यो भन्ने शैलीमा लकडाउन हटाउने निर्णय गर्यो । चैत ११ गते लकडाउन गर्ने निर्णय पनि हतारमै भएको थियो । साउन ७ गते हटाउने निर्णय पनि हतारमै भयो । अहिले नै लकडाउन नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागिरहँदा लकडाउन भयो । तत्काल लकडाउन नहटे हुन्थ्यो भन्ने भइरहँदा लकडाउन हट्यो । उतिबेला लकडाउन हुँदैछ भनेर नागरिकले तयारी गर्न पाएनन्, अहिले लकडाउन हट्दैछ भन्ने सोच्नै पाएनन् । अर्थात् नागरिकले सोचेभन्दा फरक भयो सरकारको निर्णय ।
हतारमा लकडाउन गर्नु र हतारमा ‘अनलक’ गर्नुमा सरकारको आफ्नै तर्क होला । लकडाउन गरेकैले सङ्क्रमण फैलिएन भनेर सन्तुष्ट पनि होला । सङ्क्रमण फैलिन नदिन लकडाउन कति सफल भयो भन्ने कुरामा सबैका आ–आफ्नै विश्लेषण होलान् । तर लकडाउनकै कारण आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिने नै गरी ठूल्ठूला समस्या र अप्ठ्यारा निम्तिएका छन् । जुन सजिलै किनारा लगाउन गाह्रो छ ।
ती समस्याबारे चर्चा गर्नुअघि सरकारी निर्णयका केही अमिल्दा पाटो नियालौँ ।
तयारी विनाको हचुवा निर्णय
एउटा कुरा सत्य हो कि सङ्क्रमण रोकिएन भन्दैमा सधैँभरि लकडाउन गरेर सकिँदैन । आर्थिक क्रियाकलाप र नागरिकको दैनिकी चलायमान बनाउनुपर्छ, त्यसैले लकडाउन हटाउने निर्णय भयो । तर लकडाउन हटाउने निर्णय गर्दा सरकारले सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले तोकेको आधारलाई समेत ख्याल गरिएको छैन ।
डब्ल्यूएचओका अनुसार लकडाउन हटाउनको लागि सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यन्तै कम हुनुपर्छ । लकडाउन हटेलगत्तै जोखिम बढ्ने भएकाले त्यसैअनुसार अस्पतालको तयारी गरिनुपर्छ । अस्पतालमा स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर र आईसीयू बढाउँदै पीसीआर परीक्षणको दायरा पनि बढाउनुपर्छ । कार्यालय या कार्यस्थलमा कर्मचारीलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन र सुरक्षित साथ काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । अनि लकडाउन खुलेपछि कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा आमनागरिकलाई थाहा दिनुपर्छ । तर सरकारले यी कुनै कुरामा ख्याल नगरि लकडाउन हटाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका निर्णय कुनै आधार विना हचुवाको भरमा भइरहेका छन् । पहिलो त एक जना मात्रै सङ्क्रमित थपिँदा लकडाउन सुरु भयो । एक सय ५० थपिएको दिन लकडाउन हटाउने निर्णय भयो । यातायात व्यवसायी जोर–बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक गाडी चलाउन राजी भएको भोलिपल्ट जोर–बिजोर प्रणाली हट्यो । सरकारले जोर–बिजोरको व्यवस्था हटाएलगत्तै सडकमा कोरोना सकिएझैँ गरी गाडी र मान्छेको ताँती लाग्यो ।
सरकारले साउन १५ देखि होटल र रेस्टुराँ खोल्न पाइने भनेको छ । तर होटल र रेस्टुराँले खानेकरा होम डेलिभरि गर्न पाउने भनिएको छ । अथवा सरकारी निर्णयअनुसार होटलमा जान र बस्न पाइन्छ तर खाना बाहिरबाट बोकेर ल्याउनुपर्छ, त्यही खान पाइँदैन ।
भदौ १ देखि स्कुलले भर्ना लिन पाउँछन् तर स्कुल खोल्ने निर्णय नभएकाले स्कुलमा पढाइ हुने छैन । अर्थात् अभिभावकले स्कुललाई भर्ना शुल्क बुझाउनुपर्छ तर छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन चाहिँ पाइँदैन ।
भदौदेखि लामो दुरीका गाडी र हवाई जहाज पनि चल्छन् । चार महिनासम्म खुम्चिएर बसेका मान्छे अब जहाँको यात्रा पनि गर्न पाउँछन् । तर मानिस जति चलायमान भए र हिँडडुल गर्न पाए पनि स्पा, स्विमिङ पुल र हेल्थ क्लब बन्दै रहने छन् । कञ्चनपुरको मान्छे झापा र झापाको मान्छे कञ्चनपुर अर्थात् देशको जुनसुकै ठाउँबाट काठमाण्डौ र काठमाण्डौबाट जहाँ पनि जाँदा कोरोनाको डर नहुने अनि घर नजिकैको स्पा,
स्विमिङ पुल र हेल्थ क्लब जाँदा चाहिँ कसरी कोरोनाको डर हुने ? सरकारसँग प्रस्ट तर्क छैन ।
बजार, पसल र सपिङ मल खोल्न पाउँदा सिनेमा हल र चिडियाखाना खोल्न किन नपाइने भन्ने जवाफ पनि सरकारसँग छैन ।
लकडाउनमा सम्बन्ध ‘डाउन’
लकडाउन गर्नुको मुख्य उद्देश्य थियो, कोरोनाको सङ्क्रमण समुदायमा नफैलियोस् । झण्डै चार महिना लकडाउन गर्दा कोरोनाको सङ्क्रमण धेरै फैलिन पाएन, उद्देश्य पूरा भयो भन्ने सरकारलाई लागेको छ । तर लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा कति धेरै असर गरेको छ भन्ने चाहिँ कमैले मात्र लेखाजोखा गरेका छन् ।
लकडाउन भएपछि सबैतिर काम ठप्प भयो । व्यापार, व्यवसाय बन्द भए । उद्योग कलकारखाना, प्रतिष्ठान चलेनन् । कामदारले तलब पाएनन् अनि मालिक र कामदारको सम्बन्ध बिग्रियो । अहिले होटलदेखि मिडियासम्मको अवस्था यही छ । लकडाउन हटे पनि बिग्रिएको सम्बन्ध तत्काल सुधार हुने सङ्केत देखिएको छैन ।
लकडाउनकै बेला सत्तारुढ दल नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरुबीचको सम्बन्ध बिग्रियो । लकडाउन नभएको भए पनि खटपट त हुन्थ्यो होला नै । तर लकडाउनकै बेला यसरी सम्बन्ध बिग्रनुको मुख्य कारण हो, लकडाउनले अरु काम नभएपछि नेताहरु फुर्सदिला भए अनि सत्ताको जोड, घटाउमा लागे ।
नेताहरुमा मात्र होइन, नागरिकबीचको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको छ । पहिले पहिले विदेशबाट फर्किएकाहरुको गाउँघरमा अर्कै शान र मान हुन्थ्यो । कोही विदेशबाट आउँदा परिवार, आफन्त र छिमेकी वरपर झुम्मिन्थे । तर अहिले विदेशबाट कोही फर्कियो भने घर पुग्दासम्म उसले अपमान र अपजस भोग्नुपर्छ । लकडाउनकै बेलामा विदेशबाट आएर कोरोना ल्यायो भनेर समाजले अर्कै नजरले हेर्छ ।
गाउँघरमा भएका र विदेशबाट फर्किएकाबीचको सम्बन्ध मात्रै होइन, जागिर गुमाउने र नगुमाउनेबीचको सम्बन्धमा पनि खटपट आएको छ । लकडाउने गर्दा कतिपयको जागिर गएको छ, कतिपयको कामले पनि निरन्तरता पाएको छ । पहिले उत्तिकै कमाइ हुने तर अहिले एउटाको कमाइ नहुने र अर्कोको कमाइ हुने भएपछि इष्र्या र डाह त हुने नै भयो ।
लकडाउनपछि बिग्रिएका यस्ता सम्बन्ध कुनै सामान्यजस्ता देखिन्छन्, कुनै गम्भीर खालका । लकडाउनकै कारण बिग्रिएका यस्ता सम्बन्ध के कसरी सुधार हुन्छ भनेर अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
भाइरसभन्दा डरलाग्दो कोरोनाको ‘साइड इफेक्ट’
कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्नकै लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गर्यो । लकडाउनकै अवधिमा कोरोनाबाट ४० जनाको ज्यान गयो । लकडाउन हटेको पहिलो दिनमै दुई जना थपिए । ज्यान गुमाउनेमध्ये सबै कोरोनाकै कारण होइनन् । अरु रोग भएकालाई कोरोनाले छिटो गलाएको मात्र हो । अर्थात् लकडाउनको अवधिमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने तुलनात्मक रुपमा कम छन् ।
कोरोनाभन्दा डरलाग्दो आत्महत्या देखिएको छ । लकडाउनभन्दा पहिले दिनमा सरदर १२ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेकोमा लकडाउनपछि दैनिक १७ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । कोरोनाको डरसँगै लकडाउनले आम्दानी गुमेपछि मानसिक तनावका कारण धेरैले आत्महत्या गरेको देखिएको छ । कतिपय मानसिक समस्यामा परेका छन् । कोरोनाभन्दा डरलाग्दो मानसिक समस्या देखिएको छ ।
अझै केलाउँदै र खोतल्दै जाने हो भने कोरोनालाई रोक्न भनेर लगाइएको लकडाउनले कोरोनाभन्दा अरु डरलाग्दा समस्या ल्याएको छ । एकातिर कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको र अर्कोतिर लकडाउनकै कारण निम्तिएका समस्यातिर ख्याल नै नगरि सरकारले हचुवा पारामा निर्णय गर्ने गरेको छ । सरकारले कोरोना नै सकिएझैँ गरी लकडाउन हटाउने निर्णय गरे पनि आमनागरिकले कोरोना सकिएको छैन भनेर सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।
अन्तिम अपडेट: बैशाख १६, २०७८
July 23, 2020, 3:45 p.m.
निकै उत्कृष्ट लेख लाग्यो अहिलेको समयमा हरेक नागरिकको मनमा खेलेको प्रस्न को सरल जवाफ
१४ हजारभन्दा धेरैकाे नमुना परीक्षण गर्दा २ हजार ४ सय ७६ जनाम...
एकैपटक १० बच्चा जन्मिए भनेर विश्वभर चर्चा पाएको दक्षिण अफ्रिकाको खबर झुटो !
मेलम्चीको लेदो सामान्य बाढीभन्दा फरक छ
असार ८, २०७८ मंगलबार
पूर्व तयारी नभएकैले बाढी पहिरोबाट क्षति धेरै
बालबालिकालाई कोरोनाको तेस्रो लहरबाट जोगाउन अहिलेदेखि नै तय...
आफैंले पौरख गरेर श्रीमानलाई स्वदेश फर्काउने टुकादेवी
छाउ हुँदा ओडारमा बस्ने महिला घरमै बस्न थालेपछि...